Electricity Generation Inc. General Directorate Mutevedzeri Wemapurisa Vachatanga | RayHaber | raillynews
mushaGENERALMabasaElectricity Generation Inc. General Directorate ichaita kutenga kweMubatsiri Inspector
15 / 01 / 2020 Mabasa, GENERAL
Electricity Generation Inc. (EÜAŞ) General Directorate Mubatsiri Anodzora Kupinda Ongorora. EUAS, zvichienderana neye KPSS danho richasarudza ivo mazana makumi maviri nemaviri vachasarudza vanoongorora gumi. Zuva rekupedzisira rekunyorera bvunzo dzevashandi iri rekuzivisa rakaziviswa semusi wa200 Kukadzi 10 panguva pfupi yapfuura.
Electricity Generation Co Inc. mukati meSevhisi yeMagetsi uye Natural Natural. (EÜAŞ) General Directorate Assistant Inspector Kupinda Muedzo kuti uitirwe mu Ankara, zvikumbiro zvebvunzo zvakatanga kutorwa. Zvikumbiro zvebvunzo zvinogona kuitwa naFebruary 3, 2020 zvichangoburwa. Vanokwikwidza vanoshuvira kunyorera kuti vatore vashandi vakadaro vanogona kuitirwa vari voga kana nefoni kubva kuhofisi yenzvimbo mu Ankara.
Mamiriro ezvinhu akatsvaga vanonyorera zvichienderana nekuzivisa kweZiko muRegional Gazette ndeanotevera:
(1) Kuti uwane makumi masere kana kupfuura akakwirira PSS mamakisi kubva kuPublic Personnel Selection Exam (KPSS) inoitiswa ne OSYM muna 2018 kana 2019 uye kuva pakati pevokutanga 48 pakati pevanyoreri kutanga kubva kuchikoro chepamusoro (Chikamu chakaenzana) Panzvimbo yekuti nhamba yevanenge vavhota mumutsara wekupedzisira inopfuura imwechete, vese vanobatika vane ichi chirevo vachadanirwa kunonyorwa bvunzo).
(2) Kuzadzisa mamiriro ese akataurwa muChinyorwa 657 cheiyo Civil Serviceants Law Nhamba 48.
(3) Kusave nemakore makumi matatu nemashanu okuzvarwa kubva pa01 / 01/2020 (35/01/01 uye gare gare akazvarwa).
(4) Kuve ndakapedza kubva kuhumambo hwemitemo, sainzi yezvematongerwo enyika, hupfumi, bhizinesi, hupfumi uye hutangamiri kwesainzi kwedzidzo yepamusoro inopa dzidzo kweanenge makore mana kana kubva kuzvikoro zvepamusoro soro iyo yakafanana yakagamuchirwa neDanho reDzidzo yepamusoro.
(5) Kuti isabatanidzwe nevechiuto sezuva rakanyorwa rekunyorwa kwevakadzi.
(6) Kusave nematambudziko ehutano anovatadzisa kuita mabasa avo vakaramba vachienda.
(7) Kusazvipira kune chero sangano kunze kweEUAS.
(8) Kuendesa magwaro anodiwa pamwe neyemunyori fomu kukero yakataurwa mu "II-MUFANANIDZO APA"
Nzvimbo uye Nguva Yekushandisa:
(1) Zvikumbiro zvebvunzo yekupinda zvinotanga musi wa14/01/2020 uye zvichapera pa 03/02/2020 na17.00: XNUMX.
(2) Zvikumbiro zvapera nokuzadza fomu rekunyorera rakaburitswa pawebsite yeGeneral Directorate yeEUAS (www.euas.gov.tr), pamwe nemamwe magwaro anodiwa. no: 2 1 Balgat-Çankaya / ANKARA ”mumunhu kana neposvo.
(3) Zvikumbiro zvakaitwa mushure mezuva rino, zvikumbiro zvakagashirwa mushure mezuva iri nekuda kwekunonoka kune tsamba uye maficha akaitwa aine asina kukwana kana magwaro asina kukodzera haangatariswe.
Bvunzo Sumo dzeMusoro:
mutemo; a) Bumbiro, b) Mutemo wekupara mhosva (Bhuku 1 reCriminal Code, "General Providence;, Chitsauko 2, Chitsauko 2, Suç Mhosva Kupokana Nayo Assets Kitap, Chitsauko 10, Chitsauko 2 Chitsauko Suç Kupokana NeRuzhinji Ruvimbiko ", Chikamu 3, Chitsauko 4, Suç Mhosva dzeKudzvinyirira uye Kuita Basa Revanhu Kuteedzera"), c) Mutemo weCommunity (kunze kweMutemo wemhuri), ç) Mutemo weZibvumirano ("General Law of Obligations") Zvigadzirwa Ile uye Rent, Service, Basa, Zvibvumirano),
d) Mutemo weCommerce (iyo "Kutanga" chikamu cheCommerce Code uye mabhuku e1 akanzi "Commerce Enterprise ve uye mabhuku echitatu akanzi Negotiable Zvombo);
Economics; Pfungwa yehupfumi uye mutemo, mari, bhangi, chikwereti, kuunganidzwa, mari yenyika, hukama hwenyika hupfumi uye masangano, kutonga bhizinesi uye kutarisira mari, matambudziko ezvehupfumi aripo.
mari; Fiscal theory uye fiscal policy, misimboti yeTurkey mutero maitiro uye mitemo, misimboti yemashandisirwo evashandi vehurumende uye nyaya dzekubhadhara, bhajeti nemhando dzebhajeti, zvikwereti zveveruzhinji.
Accounting, Masvomhu; a) General accounting, b) Balance pepa rekuongorora uye matekiniki, c) Zvokutengeserana maakaunzi uye nhamba.
Mamwe mutauro (Chirungu, French, ChiGerman).
Exam Nzvimbo uye Zuva:
. Hapana mukwikwidzi anozogamuchirwa muchivako mushure memaminitsi gumi nemashanu ekutanga mushure mekutanga kwebvunzo.
(2) Zuva, nguva nenzvimbo apo vachatora bvunzo vanozozvinyora mune lık Vavhoti Chitupa ”.
(1) Iyo yekupinda bvunzo ine zvikamu zviviri: yakanyorwa bvunzo uye nemuromo bvunzo.
(2) Bvunzo dzakanyorwa dzichaitwa mune yakasarudzika sarudzo (5-sarudzo) bvunzo maitiro pamwe chete nemhinduro imwechete yakarurama mhinduro. Mhinduro dzisina kunaka hadzingakanganisi nemhinduro dzechokwadi.
(3) Vaya vasingapfuure bvunzo dzakanyorwa havadaidzirwe ongororo yemuromo.
(4) Giredhi yakazara mune dzakanyorwa uye mumuromo bvunzo ndeye zana mapoinzi.
(5) Mune bvunzo dzakanyorwa, mibvunzo inokwana zana nemishanu inozobvunzwa, makumi maviri neshanu kubva kuboka rechidzidzo chega chega.
(6) Kuti iongororwe kubudirira pabvunzo dzakanyorwa, bvunzo dzeimwe mutauro hadzifanirwe kupfuura makumi mashanu, imwe neimwe mamakisi anotorwa kubva kune mamwe mapoka ebvunzo haafanire kuve pasi pe50 uye avhareji haafanire kuve pasi pe60. Vokutanga makumi maviri vanyoreri vane akanyanya kunyora bvunzo mamakisi pakati pevakabudirira kunyorwa vachakokwa kumunongedzo wemuromo.
(7) Kana paine vanhu vanopfuura makumi maviri, nekuti vakawana mapoinzi akaenzana pakunyora bvunzo, vese vanyoreri vane chiyero ichi vanokokwa pabvunzo yemuromo. Vamwe havakodzere kunyorwa bvunzo mhinduro.
. http://www.euas.gov.tr Izvo zvinonzi zvaziviswa kubva kune internet kero. Vabvunzurudzwe vane kodzero yekutora bvunzo dzemumuromo zvakare vanopihwa chiziviso chakanyorwa.
(9) Iko kuongorora kwemuromo kuchaitwa kubva kumapoka ezvinyorwa zvekuongorora zvakanyorwa. Mukuongorora kwemumuromo, ruzivo rwevavhotera zvakawandisa uye hunhu hwega hweavo vavanoda sehungwaru, kumhanya kwekutamisa, kugona kutaura, maitiro uye kufamba zvinoteedzerwawo.
(10) Kuti iongororwe kubudirira mune bvunzo dzemumuromo, avhareji yemakisi akapiwa nenhengo yega yega yebhodhi yekubvunzo pamusoro pemakero ezere zana haafanire kuve pasi pemakumi manomwe emapoinzi.
(11) Kupinda bvunzo giredhi; Iyo inoverengwa nekutora avhareji yemanyoreji uye akanyorwa pamuromo mamakisi.
(12) Mubudiriro yekubudirira yakaumbwa mushure mekuverenga kwegiredhi rekunyorwa bvunzo, kana huwandu hwevakabudirira hunowedzera huwandu hweVabatsiri vekutarisirwa kutorwa (kana huwandu hwebudiriro hwakapfuura vanhu gumi), iwo ane yepamusoro pekupinda mabvunzo zvikoro anosarudzwa. Panyaya yekuenzana kwemamaki ebvunzo dzekupinda, anenge achivhotera ane giredhi repamusoro remutauro wekutanga anotungamira. Vamwe havakodzeri bvunzo.
(13) Vachavhara vanofanira kuendesa zvichemo zvavo maererano nemibvunzo yekunyorwa kwekunyorwa uye mashandisiro eviwo kuHutungamiri hweEEAŞ Yekuongorora Board mukati memazuva matatu ekushanda kubva pazuva rekubvunzwa. Zvinoramba zvakagashirwa mushure mekupera kwenguva ino hazvingatariswe. Kukwikwidza kunoongororwa mukati memazuva mashanu ekushanda uye munhu anenge aripo anoziviswa nekunyora. Zvinopesana nemhedzisiro yeongororo yakanyorwa, kuziviswa kwemhedzisiro, zvinopesana nekuongororwa kwemuromo zvinoitwa kuHutungamiri hweEÜAŞ Kuongorora Board nechikumbiro mukati memazuva manomwe mushure mekuziviswa kwemhedzisiro. Kukwikwidza kuchaongororwa nebhodhi rekuongorora mukati memazuva gumi nemaviri zvichangoburwa uye kuziviswa kune anenge akanangana nekunyora.
(14) Rondedzero yevasarudzo vakapasa bvunzo yekupinda http://www.euas.gov.tr Izvo zvinoziviswa pawebsite kero uye zvakare kudikanwa kuziviswa kunoitwa kwavari.
Mutevedzeri Wese Directorate weDziviriro Zvekurima Mabhizimusi Kunotenga Assistant Inspector
TÜDEMSAŞ Mukuru Mukuru Wechipatimendi Mubatsiri Inspector Entrance Exam Announcement
Job Advert: TCDD Mubatsiri Inspector Procurement Notice
TCDD TÜDEMSAŞ Mutevedzeri Mutsvakurudzo Announcement
Jobho: TÜDEMSAŞ mubatsiri mukuru
TCDD Kutakura Mubatsiri Wakaongorora Inspector Exam Announcement
Electricity Generation Inc. General Directorate
Electricity Generation Inc. Kuunganidzwa kweMubatsiri Inspector General Directorate
Mubatsiri Inspector Kuwana
Nhasi munhoroondo: 18 February ne 1856 Reform Edict